नेपालमा प्रतिवर्ष १५०० बालबालिकामा क्यान्सर, भरतपुरमा ५५ प्रतिशतमा उपचार सफल – Health Post Nepal
२०७६ माघ २९ गते १५:१७
खैरहनी नगरपालिकाका २६ वर्षीय युवालाई ११ वर्षअघि शरीरमा रातो दाग र ज्वरो आउने समस्या देखियो । परिवारले उनलाई भरतपुरको पुरानो मेडिकल कलेज पुर्याए, तर रोग पत्ता लागेन ।
कक्षा ८ मा पढ्दै गरेका छोराको रोग निको नभएपछि परिवारले भरतपुर क्यान्सर अस्पताल पुर्याए । त्यहाँ गएको १० दिनपछि रक्तक्यान्सर भएको पुष्टि भयो । उनलाई करिब एक वर्षको अवधिमा ६ वटा केमो चढाइयो । तर, रगतमा क्यान्सर सेल देखिन छाडेन ।
पछि रेडियोथेरापीसमेत गर्नुपर्यो । क्यान्सर अस्पतालनजिक भएकाले समय–समयमा थेरापी गराए । अहिले भने उनी स्वस्थ नै छन् । तर, १५ वर्षको उमेरमा देखापरेको रोग बल्झिने हो कि भन्ने चिन्ता उनी र परिवारलाई छँदै छ । उनले वर्षको एकपटक परीक्षण गराउँदै आएका छन् । उनको उपचारका परिवारले करिब १० लाख खर्चिएको छ ।
कलिलै उमेरमा क्यान्सरले सिकार बनाएका उनी एक्ला बालक होइनन् । पछिल्लो थुप्रै बालबालिकालाई क्यान्सरले पीडित बनाइरहेको छ ।
प्रतिवर्ष १५०० नेपाली बालबालिका क्यान्सरको सिकार, ८०० मात्र उपचारको पहुँचमा
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका बालरोग विभाग प्रमुख कृष्णसागर शर्माका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष १ हजार ५ सय क्यान्सरपीडित बालबालिका थपिने गरेका छन् ।
‘कुल जनसंख्याको ४७ प्रतिशत मानिस १९ वर्षमुनिका छन् । विश्वको तथ्यांक हेर्दा १० लाखमा १२० जनालाई क्यान्सर रोग देखिन्छ,’ डा. शर्माले भने, ‘नेपालमा प्रत्येक वर्ष १ हजार ५ सय क्यान्सर लागेका बालबालिका थपिन्छन् । तीमध्ये ८ सय मात्र उपचारका लागि अस्पताल आउने गरेका छन् । तीमध्ये २ सयजनाले प्रत्येक वर्ष उपचार गराउँछन् ।’
बाँकी आधाजसो क्यान्सरपीडित बालबालिका उपचारबाट वञ्चित रहेको शर्माले बताए । रोग पत्ता लागेपछि पनि विभिन्न कारणले उपचार गर्न नआउने गरेको उनको भनाइ छ । उपचार नगराउनुमा मुख्यतः आर्थिक अभाव नै प्रमुख कारण भएको उनको बुझाइ छ ।
डा. कृष्णसागर शर्मा
भरतपुरमा ५०–६० प्रतिशतमा उपचार सफल
भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा १७ वर्षको अवधिमा पाँच हजार बालबालिकामा क्यान्सररोग निदान भई उपचार गरिएको छ । अस्पतालमा उपचार गराएकामध्ये आधाभन्दा बढीमा रोग निको हुने गरेको डा. शर्मा बताउँछन् ।
‘हामीकहाँ उपचार गराउनेमा ५० देखि ६० प्रतिशत निको भएका छन्,’ उनले भने, ‘क्यान्सरका कुल बिरामीमध्ये करिब २० प्रतिशत बच्चा छन् ।’
सुरुमै रोग पत्ता लगाई उपचार गराएको खण्डमा ९० प्रतिशत क्यान्सर निको हुने उनको भनाइ छ । विकसित देशमा प्रायः क्यान्सर उपचारबाट ठिक हुने गरेको उनले बताए ।
क्यान्सरपीडित बालबालिकामध्ये ३५ प्रतिशतमा रक्तक्यान्सर
बालबालिकालाई विशेषगरी १२ वटा क्यान्सर बढी हुने गरेको छ । त्यसमध्ये पनि बालबालिकामा रक्तक्यान्सर बढी पाइएको डा. शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार क्यान्सरपीडित बालबालिकामध्ये एकतिहाइभन्दा बढीमा रक्तक्यान्सर हुने गरेको छ ।
‘क्यान्सर लागेका बालबालिकामध्ये ३५ प्रतिशतलाई रक्तक्यान्सर, २० प्रतिशतलाई ग्ल्यान्ड क्यान्सर, १५ प्रतिशतलाई ब्रेन ट्युमर हुने गरेको छ,’ डा. शर्माले भने, ‘बाँकी आँखाको रेटिना ब्लास्टोमा, कलेजो हेपाटो ब्लास्टोमा, मिर्गौलाको नेफ्रो ब्लास्टोमा, अण्डासयको जंगसेल ट्युमरलगायत हड्डी र नरम तन्तुहरूमा क्यान्सर हुने गरेको छ ।’
प्रमुख कारण वंशानुगत, सुरुमै रोग पत्ता लगाएर उपचार गराउनु नै एक मात्र विकल्प
जन्मेदेखि बाहिरी वातावरणमा बढी घुलमिल नभएकाले धेरैजसो बालबालिकामा क्यान्सरको कारण वंशानुगत पाइएको छ । ‘बच्चामा क्यान्सरको प्रमुख कारण जेनेटिक (वंशानुगत) भएकाले यसबाट खासै बच्न सकिँदैन । आमाको खानपानका कारणले पनि बालकालिकामा क्यान्सर देखापर्छ,’ डा. शर्माले भने, ‘बच्चालाई क्यान्सरबाट बचाउने सबैभन्दा राम्रो उपाय सुरुमै रोग पत्ता लगाउने र तत्काल उपचार सुरु गर्ने हो । सुरुवातमै रोग पत्ता लगाएर उपचार गर्न सकिएमा ९० प्रतिशतजति क्यान्सर निको पार्न सकिन्छ ।’
विकसित देशहरूमा ९५ प्रतिशत क्यान्सर निको हुने गरेको डा. शर्माले बताए । प्रत्येक वर्ष विश्वमा एक लाखभन्दा बढी क्यान्सरपीडित उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । तर, नेपालमा भने यसको तथ्यांक छैन ।
दक्ष जनशक्ति अभावले क्यान्सर उपचार प्रभावित, बिरामी कैयौँ गुणा थपिँदा १३ वर्षअघिकै जनशक्ति
सन् २०१८ मा भरतपुर क्यान्सर अस्पतालबाट ३०० नयाँ बिरामीसहित कुल १४ हजार ६०० बालबालिकाले ओपिडी सेवा लिएका थिए । क्यान्सर लागेका बालबालिकाको उपचारका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी हुँदा सेवा दिन कठिन हुने गरेको डा. शर्माले बताए ।
‘हामीकहाँ क्यान्सर लागेका बालबालिकाको उपचारका लागि सर्जनको अभाव छ । १३ वर्षदेखि दुईजनाले उपचार गरिरहेका छौँ जब कि यो अवधिमा बिरामी १० गुणा बढेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय क्यान्सरको हकमा रोग पत्ता लगाउने मेसिन छैन । परीक्षणका लागि भारतमा नमुना पठाएर उपचार गर्ने गरेका छौँ ।’ क्यान्सर अस्पतालमा पेडियाट्रिक सर्जन उपलब्ध नभएको उनले जानकारी दिए ।
भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा बालबालिकाका लागि २७ शय्याको जनरल वार्ड, तीन शय्याको क्याबिन र निको नहुने क्यान्सरका लागि ६ शय्याको चायल्ड केयर वार्डसहित डे केयर सञ्चालनमा छ । भरतपुर अस्पतालमा ६ बेडको पेडियाट्रिक पेलिएटिभ वार्ड सञ्चालनमा छ, जुन नेपालमा अन्यत्र कतै छैन । क्यान्सर लागेका बालबालिकालाई अस्पतालभित्र हुने उपचार सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएको छ । त्यसबाहेक औषधिका लागि एक लाख रूपैयाँ राज्यले दिने गरेको छ ।
लामो समयसम्म ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, शरीरका ग्ल्यान्ड र ग्रान्थिहरू वृद्धि हुनु, टाउको दुख्नु, हातखुट्टा कमजोर हुनु क्यान्सरका प्रमुख लक्षण रहेको डा. शर्माले जानकारी दिए ।
लायन्स बाल क्यान्सर स्वास्थ्य दर्पण हेल्थ अवार्डबाट पत्रकार र चिकित्सक सम्मानित
लायन्स बाल क्यान्सर स्वास्थ्य दर्पण हेल्थ अवार्ड २०७६ प्रदान गरिएको छ । लायन्स क्लब अफ चितवन सेन्ट्रल, लायन्स क्लब अफ नारायणगढ नारायणी र स्वास्थ्य दर्पण मिडिया नेटवर्कले शनिबार भरतपुरमा एक समारोहका बीच चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकार गरी १४ जनालाई अवार्ड प्रदान गरेको हो ।
सात प्रदेशका एक–एक स्वास्थ्य पत्रकार र दुईजना युवा पत्रकार गरी ९ जना, ४ जना चिकित्सक र एकजना नर्सलाई अवार्ड प्रदान गरिएको स्वास्थ्य दर्पण मिडिया नेटर्वकका अध्यक्ष सन्दीपकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । अवार्डबाट सम्मानित हुनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कुण्डली चौधरी, कर्णालीबाट चिरञ्जीवी अर्याल, प्रदेश ५ बाट दीपेन्द्र बडुवाल, गण्डकीबाट होमराज रानाभाट, बागमतीबाट दीपक आचार्य, प्रदेश २ बाट बृजकुमार यादव र प्रदेश १ बाट लीलाबल्लभ घिमिरे छन् ।
त्यसैगरी, युवा पत्रकार विधामा सुवास पण्डित र सूर्यप्रसाद अधिकारी सम्मानित भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । दुवै चितवनका पत्रकार हुन् ।
त्यस्तै, चिकित्सकतर्फ बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका बाल विभाग प्रमुख डा. कृष्णसागर शर्मा, डा. मदनकुमार पिया, डा. भोलाप्रसाद रौनियार र डा. प्रकाशराज न्यौपाने सम्मानित भएका छन् । नर्सतर्फ बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालकी सविना दाहाल अवार्डबाट सम्मानित भएकी छिन् ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्यमा क्रियाशील व्यक्तिलाई मात्र नभएर उत्कृष्ट सेवाप्रवाह गर्ने संस्थालाई पनि सम्मान गरिएको छ । संस्थातर्फ बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर ललितपुर सम्मानित भएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरकी निर्देशक स्वरूपा श्रेष्ठले नेपालमा क्यान्सर रोगको उपचार सम्भव भएको बताइन् । अरू रोगजस्तै क्यान्सर पनि समयमा उपचार गरे निको हुने भएकाले डराउनुनपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ तथा अंकोलोजी विभाग प्रमुख कृष्णसागर शर्माले दिनप्रतिदिन क्यान्सरका बिरामी बढ्दै गएकाले उपचारका लागि दक्ष जनशक्ति अभाव भएको बताए । क्यान्सर अस्पतालमा १३ वर्षदेखि दुईजना चिकित्सकले मात्र सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनले बाल क्यान्सर सर्जनको अभाव रहेको जानकारी दिए । १३ वर्षमा बिरामीको चाप कैयौँ गुणा बढिसक्दा पनि उपचारका लागि दक्ष जनशक्ति नथपिँदा सेवाप्रवाहमा समस्या भएको उनको गुनासो छ ।
भरतपुर क्यान्सर अस्पताल